‘छौडा’को मिसाइल आक्रमण « News of Nepal
‘छौडा’को मिसाइल आक्रमण
२३ असार २०७६, सोमबार
आइतवार बिहानै पीएम ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारको ‘छौडा’ आतंकले सामाजिक सञ्जालमा ठूलै हल्ली खल्ली भयो । देशभर अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोको खतरा मचाई रहेका बेला कम्रेड रिमालको ‘छौडा’ मिसाइलले फेरि एकपटक नराम्रोसँग तर्साएको छ ।
रिमालले प्रहार गर्न खोजेको ‘छौडा’ गुलेली कोप्रति लक्षित थियो भन्ने स्पष्ट नभए पनि धेरैलाई ‘छौडा’को मट्याङग्राले त्रसित बनाएको धरहराको दुरविनबाट प्रष्टै देखिएको छ । अरु त अरु आफ्नै पार्टी निकटका नेता कार्यकर्तासँग समेत असाध्यै असहिष्णु तरिकाबाट प्रस्तुत हुने रिमालको शब्दबाण प्रधानमन्त्रीको भारदारी परिषद्को पछिल्लो ‘छौडा’ प्रहारले कस्का ‘छौडा’ कति सक्रिय रहेछन् भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश दिएको पाइएको छ ।
हुन त यसपटक ‘छौडा’ छोड्ने काम एकाबिहानै भएको छ । किम्वदन्तीअनुसार ‘छौडा’ रातिमा छोड्ने बताइन्छ । यसपटक रातिमा ‘छौडा’ छोडिएको भए त्यतिको चर्चा नहुन सक्थ्यो । विहान छोडिएकाले ‘अरिंगाल’ र ‘हरेउ’ जस्तै ‘छौडा’ ले पनि दीर्घकालीन चर्चा पाउनेछ । कहिले काहीँ ‘अरिंगाल’, ‘हरेउ’ र ‘छौडा’ जस्ता शब्द सिर्जनाले ‘पाडो लाटो भएर दूध खान्छ, काग बाठो हुँदा दिसा खान्छ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्ने गरेको छ ।
सवारी भाडामा छुट लिने ? अन्तर्वार्ता
मुटुमाथि ढुंगा राखी…
अर्ग्यानिक दर्शक कहिले ?
आप्रवास कडाइ गर्ने ट्रम्पको नीतिलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको अनुमोदन
चीनमा कोरोना भाइरसबाट मर्नेको संख्या सय..
ट्रक दुर्घटनामा तीनको मृत्यु
१२ हजार शिक्षकको दरबन्दी मिलान शुरु
दण्ड जरिवाना हटाइयो नयाँ पत्रकारले जाँच दिनुपर्ने
इट्टा उद्योग ‘ज्यान’ मार्दै, उन्मुक्ति पाउँदै
कोरोनाभाइरसः चीनमा सङ्क्रमणबाट १०६ जनाको मृत्यु, हजारौंको सङ्ख्यामा बिरामी
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन (लाईभ)
टिप्परले ठक्कर दिँदा एक जनाको ज्यान गयो
चीनमा कोरोना भाइरसबाट मर्नेको संख्या सय बढी, कर्मचारीको बिदा बढाइयो